Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa : “Hotohizana ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny zandarimaria” -
AccueilSongandinaJeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa : “Hotohizana ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny zandarimaria”
Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa : “Hotohizana ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny zandarimaria”
09/04/2018 admintriatra Songandina 0
Tafiditra tao anatin’ny ezaka goavana nimasoan’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena hatramin’izay ny ady hatao amin’ny kolikoly izay mbola mampitaraina ireo vahoaka ankehitriny. Nanamafy ny Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa , Kaomandin’ny Zandarimaria-pirenena vaovao, fa hotohizana io ezaka io ary hohatsaraina hatrany. Nambarany fa tafiditra ao anatin’ireo vina miisa efatra lehibe izay napetrany ho an’ny “zandarimaria rahampitso”, entina hanatanterahana sy hanatsaràna ny asa rahateo izany.” Zandarimaria madio amin’ny heviny mivantana sy ankolaka no tanjona voalohany. Ny resaka fanamiana, ny resaka fahadiovan’ny toeram-piasàna sy ny toeram-ponenana no tiana ho lazaina amin’ny hevitra mivantana . Ny ankolaka dia eo amin’ny fahadiovana eo amin’ny resaka ady amin’ny kolikoly amin’ny endriny maro isan-karazany izay mbola hotohizana fa efa napetraky ny teo aloha”, hoy ny fanazavàn’ity tomponandraikitra ambony ity. Nambarany tao anatin’izay resaka fahadiovana izay ihany koa fa hisy ny eritreritra hanao fanofanana manokana amin’ny resaka fandraisan’olona sy ny fifandraisana satria nolazainy ny fa manana olana amin’izay lafiny izay ny eo anivon’ity vondron-kery ity.
“Rehefa afaka mifandray tsara aman’olona izahay ka tsara fifandraisana amin’izy ireo, dia afaka hatao tsara ny fanafainganana ny fiaraha-miasa raha misy trangan-javatra, indrindra eo amin’ny lafiny tsy fandriampahalemana sy ny asan-dahalo”, hoy ny fanampim-panazavàn’ny jeneraly Njatoarisoa. Isan’ny tanjona napetrany ihany koa , ny zandarimaria matihanina amin’izay hataony. Ny tiana ambara ao anatin’izany, dia tokony hiverina amin’ny asa fanaony andavanandro ny zandarimariam-pirenena fa tsy hihazakazaka foana aorian’ny fitrangan’ny loza. Nambarany fa efa misy tetika sy paikady entina manatanteraka izany. Vina fahatelo hotratrarina ihany koa ny zandarimaria voahomana sy vonona hiatrika ny resaka sehatra fifidianana rehetra, ka isan’ny goavana ao anatin’izany ny fandriampahalemana ny tany, ary efa misy ny fampianarana sy ny fanazaran-tena hahafahana miomana amin’izany. Ny farany kosa, dia ny zandarimariam-pirenena ao anatin’ny fanovàna tanteraka. “Tsy maintsy hisy fanovàna vitsivitsy hatao raha te hanana Zandarimaria manaraka ny fenitra tokony arahina isika. Tafiditra ao anatin’izany ny resaka fitantanana olona”, hoy hatrany ny voalazany. Nohazavain’ity tomponanadraikitry ny fibaikoana eo anivon’ny zandarimaria ity fa misy amin’ireo vina ireo no ho tanterahana ao anatin’ny volana vitsivitsy, hisy kosa anefa ireo tsy maintsy miandry fotoana. Tamin’ny asabotsy lasa teo moa no nanatanterahana ny famindrana asa teo amin’ity Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena vaovao ity sy ny Kaomandin’ny Zandarimaria teo aloha, ny Jeneraly Ramiandrasoa Jean De Dieu Daniel, izay natao teny amin’ny toby Ratsimandrava.